Iyo beta vhezheni yeTVOS 10.0.1 uye watchOS 3.1 mumaoko evanogadzira | Ndinobva mac
Isu takatopa chiziviso zuro nezvekuwanikwa kweiyi mitsva beta beta yakaburitswa neApple kune vanogadzira mune yedu shamwari yaNacho chinyorwa pa macOS Sierra 10.12.1 beta. Izvi itsva beta shanduro dzeTVOS 10.0.1 uye watchOS 3.1 Ivo vanosvika kune vanogadzira kuti vatange zvakare nemaitiro ekuvandudza, gadziriso yekugadzirisa uye kugadzirisa kuchengetedzeka kweshanduro dzakaburitswa Uye zvakare, ivo vakomana vanobva kuCupertino vanokumbira vanogadzira kuti vatarise paBluetooth, WiFi uye mamwe mabasa makuru emidziyo iyi kupa mushandisi ruzivo rwevashandisi zvirinani pane vhezheni yapfuura.
Isu tese tatoziva kuti Apple haimise iyo yekuvandudza muchina uye ichokwadi icho hapana kana mazuva maviri apfuura kubvira macOS Sierra yaburitswa zviri pamutemo, asi beta inogara ichiuya kuzogadzirisa izvo uye iye zvino vagadziri vatove neanotevera vhezheni patafura kuti vaiongorore zvakanyanya sezvinobvira uye voenderera neinotevera.
Muchiitiko chevashandisi vakanyoresa munharaunda yeruzhinji beta tinofanirwa kutaura izvozvo Iyi beta nyowani yakaburitswa neApple ichakurumidza kuwanikwa, pamwe nanhasi. Saka vese avo vari muchirongwa ichi cheveruzhinji beta zvinogona kuti mumaawa mashoma ekudzokororwa anosvika kana usati watoita patiri kunyora nhau idzi. Parizvino vese vagadziri vatove vanowanikwa muApple account yavo kurodha pasi kubva ku webhusaiti yekambani yevanogadzira kana kuburikidza neOTA (pamusoro-iyo-mhepo) system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » TvOS 10.0.1 uye mawatchOS 3.1 beta vhezheni mumaoko evanogadzira
Zvese NezveGoogle Allo: Zvimiro uye Dziviriro Nyaya
Apple inoburitsa yekutanga beta yekutanga yekuvandudza MacOS Sierra